Amiir Wiliam oo marki ugu horreysay booqday Daanta Galbeed - BBC News Somali
Amiir Wiliam oo marki ugu horreysay booqday Daanta Galbeed
Image caption Amiirka oo la kulmay qoxootiga ku sugan xerada Jalazone ee u dhaw Ramalah
Amiir william ayaa wuxuu muujiyey sida ay uga go'an tahay in "nabad waarta" lagu soo dabbaalo Israa'iil iyo Falastiin oo claadda la soo afjaro xilli uu booqanayey Daanta Galbeed.
Amiir William waa xubinki ugu horreeyey oo boqortooyada Britain ka socda oo booqasha rasmi ah ku taga dhulka Falstiinin.
Amiirka oo talaadadi ku sugnaa Israa'iil oo la kulmay madaxweyne Reuven Rivlin wuxuu ku boorriyey "farriin nabadeed" inuu ka qaado uuna ka gaarsiiyo Mr Cabbaas.
Mr Cabbaas oo Amiirka la hadlay ayaa wuxuu sheegay "dhinaca falastiin iney marwalba diyaar u yihiin iney heshiis nabadeed ay la gaadhaan Israa'iil".
Amiir William wuxuu sheegay: "inuu aad ugu faraxsan yahay iney labada dhinacba ay isku soo dhawaasho muujiyaan uuna doonayo inuu xiriir wanaagsan uu kala yeesho dhinaca waxbarashada iyo howlaha bani aadaminimada oo ay horayba xiriir uga lahaayeen. Rajadeyduna waxay tahay ayuu yiri sida ay labada dhinacba ka dhawaajiyeen in la soo afjaro colaadda iyo cadiifadda gaamuurtay ee labada dhinac ka dhaxeyso lana soo dabbaalo nabadgalyo waarta".
Xerada qoxootiga uu Amiir William booqday oo ay gacanta ku hayso qaramada midoobay wuxuu kula hadlay hooyooyin xerooyinka ku sugan oo carruur yaryar oo ay siteen xilligaa loo tallaalayey shaqaalahuna ay ku howlanaayeen bixinta adeeg caafimaad.
Wuxuuna ugu dambeyn amiirka uu ka qaybgalay munaasabad dhaqami ah oo Ramallah lagu qabtay oo ay Falastiiniyiintu fankooda iyo qoob ka ciyaar halkaasi ku soo bandhigayeen, wuxuuna la kulmay dhalinyaro da'yar ah oo kubbad ciyaareyso.
Image caption Amiirka oo Ramallah kula kulmay dhalinyaro kubbad ciyaareyso
Image caption Amiirka oo daawanayo ciyaar dhaqameed Falastiniyiintu leeyihiin
Madaxweyne Cabaas oo soo dhaweeyey go'aanka Amiirka ayaa wuxuu sheegay iney ka go'an tahay iney labada dalba noqdaan laba dal oo xor ah deris wanaagna uu ka dhaxeeyo, iyada oo booqashada Amiirka ay sii xoojineyso ayuu yiri xiriirka soo jireenka ee u dhaxeeyey Britain iyo shacabka Falastiin.
Mr Rivlin wuxuu Amiir William ka codsaday inuu Mr cabbaas uu u sheego "In la joogo xilligi ay si wada jir ah u raadin lahaayeen kalsooni labada dhinac dhex marto tallaabbada ugu horreysana ay tahay in la isfahmo si aan xal waara uga gaarno masiibada muddaba inaga dhaxeysay loona soo dabbaalo nabad waarta".
Image caption Amiir William oo wadahadal la yeeshay Madaxweyne Maxamuud Cabbaas
Safiirka Britain u jooga Israa'iil David Quarry oo codsiga labada dhinac ka jawaabaya ayaa wuxuu sheegay inuu Amiir William uu aad ugu faraxsan yahay "hadallada iyo rabitaanka labada dhinacba ka soo yeeray iyo sida ay u doonayaan iney si wadajir ah u baadi goobaan waddo nabadeed oo ay uga gudbaan xaaladda colaadeed ee hadda taagan".
Waxaanna labada dhinac ka dheehannay ayuu yiri rabitaan iyo isbeddel weyn oo aad mooddo iney ka soo dhaqaaqeen halki ay marki hore taagnaayeen balse ma aaminsani ayuu yiri inaan rabitaankooda u qaadanno farriin siyaasadeed oo la taaban karo.
Image caption Amiir william oo heesaa u dhalatay Israaai'ili ah kula kulmay Telaviv
Image caption Amiirka oo la kulmay arday ku sugan xerada qoxootiga ee Jalazone
27 Juunyo 2018
26 Juunyo 2018
25 Juunyo 2018